Umlindi wewindows Watch ufumana uhlaziyo olukhulu | Ndisuka mac
Umlindi wewindows Watch ufumana uhlaziyo olukhulu
I-Apple ayinikwanga kakhulu ukuba inike kakhulu Libertad kubasebenzisi bakho ukuze bakwazi ukwenza ngokwezifiso ukubonakala kwezixhobo zabo. Kuthathe iminyaka emininzi ukugoba ingalo yakhe kwaye ekugqibeleni ube nakho ukufumana ii-iPhones zethu ngezikrini zasekhaya ezinokuqwalaseleka ngakumbi kwisitayile esinyulu se-Android.
Kodwa ngokungathandabuzekiyo isixhobo esineyona nkululeko yokuhamba xa kufikwa ekutshintsheni imbonakalo yaso Apple Watch. I-Watchsmith sisicelo sokuqhubeka nokuxhaphaza amathuba ezi nguqu zembonakalo yesikrini sokubukela. Ngoku ifumene ukuphuculwa okunomdla.
Umlindi, sisicelo sabasebenzisi beApple ababonelela ngeendlela ezininzi zokwenza ngokwezifiso ubuso bewotshi. Ngoku ufumene uhlaziyo olukhulu olubandakanya amanqaku amatsha.
Isicelo sithatha ithuba lokumiliselwa kwescreen seApple kwaye ineengxaki ezahlukeneyo ezinokongezwa kubuso bewotshi, ukwandisa ukwenza ngokwezifiso ngaphaya kokunikwa yiApple kwiWOSOS.
Inguqulelo 2.0 yesicelo ngoku izisa ezinye iindlela kubasebenzisi bayo. Umzekelo, iWatchsmith ngoku ithatha ithuba elipheleleyo kwiimpawu ze i-watchOS 7, Ukuvumela ukusebenza okungcono kunye neengxaki ezininzi zesicelo esinye. Abasebenzisi baya kufumana kwakhona iindlela ezintsha zokubonisa iifoto, ukucofa iiyure ezingama-24, ikhalenda yokubhaliweyo, indlela yelanga, nokunye okuninzi.
Ngaphakathi kwi-app, iWatchsmith ngoku inezikrini zoqeqesho lweemetrikhi, iimephu, ukubetha kwentliziyo, iikhalori, ukujonga ikhalenda ye-Outlook, igrafu yokuphakama, kunye nezinye izakhono ezintsha. Uhlaziyo lukwazisa ngakumbi ukhetho lwefomathi yexesha, indawo yokubala yexesha, kunye ne icon eyakhiwe ngokutsha.
Umlindi uyafumaneka njenge simahla kwi Ivenkile yosetyenziso, kodwa ezinye izinto zifuna ukubhaliswa kwenyanga nge-1,99 Euro okanye ukubhaliswa konyaka kwe-21,99 Euro.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Umlindi wewindows Watch ufumana uhlaziyo olukhulu
Ngaba uthathe inkathazo yokufunda izimvo zabasebenzisi abakhuphele usetyenziso? Isuka kwa-5 ephezulu yeyesi-2. Wonke umntu uyinike inkwenkwezi e-1.
Kutheni upapasha uphononongo malunga neapp esebenza kuphela ukuba uhlawula umrhumo?
Ngapha koko, unezinto ezininzi ezinomdla zokupapasha, ngaba uchitha ixesha lethu nale?
Ngaba le vidiyo yokwenyani yee-AirPods 3? Hayi bayinyani